Farmaajo oo kormeeray ciidanka, kana hadlay arrin la-yaab ku noqotay + Sawirro | Caasimada Online
Home Warar Farmaajo oo kormeeray ciidanka, kana hadlay arrin la-yaab ku noqotay + Sawirro
Farmaajo oo kormeeray ciidanka, kana hadlay arrin la-yaab ku noqotay + Sawirro
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa war kasoo saartay diiwaan gelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo ay sheegeen in lasoo gaba-gabeeyey.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo ay wehliyeen guddiga loo xil saaray diiwaan gelinta ciidamada ayaa kor meeray xarunta uu ku shaqeynayey guddigaas, halkaas oo lagu soo bandhigay xogta ciidamada qalabka sida ee la diiwaan geliyey.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahad celiyey guddiga howshan qabtay ee uu hoggaaminayey Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre.
Hoos ka aqriso warka kasoo baxay Villa Somalia
Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa uga mahad-celiyey guddiga howshan qabtay ee uu hoggaaminayey Raiisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre.
Guddigaas oo ka kooban Wasaaradda Gaashaandhigga, Talisyada kala duwan ee Ciidanka Qalabka Sida, Wasaaradda Maaliyadda, khubaro iyo lataliyeyaal ka tirsan xafiiska Madaxweynaha iyo Raiisul Wasaaraha.